Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa is seen during his first State of the Nation address on Wednesday during which he vowed to ensure the rule of law, fight corruption, enact laws that attract investors and ensure free and fair elections next year, in
Vachitura mashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika, VaMnangagwa vati hurumende iri kushushikana nekudonha kwakaita hupfumi hwenyika vachiti vachatora matanho akasimba ekugadzirisa zvese zviri kunetsa munyika.
VaMnangagwa vati vachasimbaradza nyaya dzekurima pamwe nekucherwa kwezvicherwa zvakaita segoridhe, kuwanisa veruzhinji mabasa, kudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika.
Vatiwo hurumende ichataura nehurumende dzekunze dzanga dzisiri kuwirirana neZimbabwe pasi pehutongi hwaVaMugabe.
"Hurumende yangu ichashanda zvakasimba kuti tiwedzere huwandu hwezvatinotengesa kunze kwenyika kuti tiwane mari yekunze iyo yatiri kuda," vadaro VaMnangagwa.
VaMnangagwa vatiwo kuti zvese zvibudirire vachasimbaradzawo nyaya yekurwisana nehuori hunonzi hwakatekeshera muhurumende
"Huori hunofanira kupedzwa, hatisi kuita zvekutamba nenyaya iyi uye hapana acharegedza kusungwa kana achiita zve huori uye huruemende yakatotanga kare nyaya iyi," vatsanangura VaMnangagwa.
VaMnangagwa vadzokorodza zvakare kuti hurumende yavo ichaona kuti sarudzo dzaitwa zviri pachena uye mitemo yose yatevedzerwa vachiti nyika haibudirire kana pasina kubudirana pachena uye kana hurumende isina kuchena.
Nhengo yeZanu PF inomirira Makonde muparamende, VaKindness Paradza vanoti vafara nemashoko aturwa naVaMnangagwa.
Asi mumwe wevatedzeri vemutungamiriweMDC-T, VaElias Mudzuri, vati mashoko aVaMnangagwa akanaka asi havafanire kungogumira mukutaura chete.
Zvichakadai, VaMnangagwa vakatarisirwa kuenda kuSouth Africa mangwana kwavari kutarisirwa kunosangana nevemabhizimusi vangade kuzosima mari yavo munyika.